Dilka Khaashuqji wuu ka hadlay, balse wuu ka gaabsaday boqor Salmaan - BBC News Somali
Dilka Khaashuqji wuu ka hadlay, balse wuu ka gaabsaday boqor Salmaan
20 Nofembar 2018
Image caption Boqor Salmaanka dalka Sacuudiga
Isaga oo markii u horraysay meel fagaare ah ka hadlay tan iyo markii Jamal Khashoqji lagu dilay magaalada Istanbul bishii hore, boqorku wuxuu sheegay in dalkiisu "uusan ka weecanaynin" fulinta caddaaladda.
Jamaal Khashqji: Maxaan ka ognahay tan iyo markii la waayay ilaa dhimashadiisa?
Shiinaha oo ku jeesjeesay Sheegashada ah in taleefanka Trump ay dhagaystaan
Hay'adda sirdoonka Maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo CIA ayaa la sheegay in baaritaankii ay waday ay ku soo gababaysay in amiir Maxamed bin Salmaan oo 33 uu ka dambeeyay dilkaas, balse madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaan wali ayidin gunaanadkoodaas.
Boqorku muxuu yiri?
"Boqortooyada waxaa lagu aasaasay qawaaniinta diinta Islaamka ee caddaaladda iyo sinnaanta ah, waana ku faraxsannahay dadaallada waaxda caddaaladda iyo xeer ilaaliyaha guud," ayuu yiri boqorka 82 jirka ah oo Isniintii la hadlayay Guddiga Shuurada.
"Waxaan xaqiijinaynaa in dalkani uusan waligii ka weecanaynin fulinta sharciyada Illaahay iyo in caddaalad la helo," ayuu intaas ku sii daray.
Boqorka ayaa dhanka kalana dhaliilay Iiraan oo ah dalka ay sida wayn u xifaaltamaan: "Bulshada caalamku waa in ay ka shaqaysaa sidii loo soo afjari lahaa barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan iyo ficillada kale ee halista galinaya ammaanka iyo xasiloonida."
Taxliilinta khudbadda ee wariyaha BBC-da ee Riyad Sebastian Usher
Waxaa kale oo uu ka hadlay ahmiyadda qadiyadda Falastiiniyiinta, taas oo u muuqata mid wax yar ka bidhaaminaysa in boqorku uu dan ka leeyahay waxyaabihii horay ula waynaan jiray dalkaas.
Sacuudigu yuu eedaynayaa?
Kiisaskooda ayaana maxkamad loo gudbiyay halka toban ruux oo kale oo laga shakisan yahayna baaritaanno lagu hayo.
Xagguu Maraykanku ka taagan yahay dilka?
Inkastoo hay'adda sirdoonka Maraykanka ee CIA aysan sheegin in ay hayso cadday rasmi ah oo amiir Maxamed Bin Salmaan la xiriirinaysa dilka, haddana waxaa la sheegay in masuuliyiinta hay'addaasi ay rumaysan yihiin in dil noocaas aysan cidina fuliseen iyadoon ogolaansho laga haysanin amiirka dhaxalka leh.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaase maalmo ka hor sheegtay in Dawladda Maraykanku aysan wali soo gunaanadin baaritaannadii dilkaas ayna wali jiraan "warar la isla dhex maro iyo su'aalo aan jawaab loo helin."
CIA-da Maraykanka oo Maxamed Bin Salmaan ku eedeeysay dilkii Kaashaqji
Trump: Warbixinta ay soo saareen CIA-da ee ku saabsan dilka Khaashuqji waa horudhac
"Haddii uu doonayo in uu noqdo wajiga horay u sii wadaya Sacuudi Carabiya, markaas waxay ila tahay wakhti adag ayay boqortooyadu kala kulmi doontaa masraxa caalamka," ayuu yiri isaga oo la hadlaya warbaahinta NBC Axaddii.